Natomboka any Balkans ny hetsika iraisan’ny faritra miady amin’ny fandisoam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2020 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, عربي, srpski, 繁體中文, Français, русский, polski, বাংলা, English
Sarin'ny zanabolana mampiseho ny ankamaroan'ny Balkans. Loharano: NASA Visible Earth, Azon'ny rehetra ampiasaina.
Fikambanana miisa sivy avy amin'ny firenena Balkan miisa dimy, anisan'izany ny Metamorphosis Foundation, no niara-niasa tamin'ny fananganana ny Anti-Disinformation Network for the Balkans na ADN-Balkans (Tambajotra Miady amin'ny Fandisoam-baovao) izay hetsika voalohany miampita sisintany hiadiana amin'ny fandisoam-baovao any amin'ny faritra.
Natomboka tamin'ny 2 Aprily ny hetsika araka ny nambaran'ny International Fact-Checking Day tamin'ny alàlan'ny Tambajotra Fanamarinam-baovao Iraisam-pirenena (IFCN).
Raha misy amin'ireo mpanorina ny hetsika no mpikambana ao amin'ny Tambajotra Fanamarinam-baovao Iraisam-pirenena sady mpanao sonia ny Fitsipi-pifehezana dia tsy voafetra ho an'ireo fikambanana mpanamarim-baovao ihany ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny ADN-Balkans satria manantena ny hiara-hiasa amin'ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra fampahalalam-baovao, ny sekoly sy ny hafa izy ireo.
Tsy mora ny fampifandraisana ny fisaratsarahana eo amin'ny sehatra nasionaly sy ny fiteny ao amin'ny faritra manana tantara mampitebiteby toy izany. Namoaka fanambarana ny fikambanana mpanorina nanamafy fa mitaky fomba fijery isam-paritra midadasika kokoa ny toe-javatra iainana ao Balkans satria efa manomboka miampita sisintany ny fandisoam-baovao ary mivoatra mba hifanaraka amin'ny tontolo ara-kolontsaina sy politika ao amin'ny firenena tsirairay.
Nandritra roa taona lasa, niarahan'ny Global Voices niasa ny mpiara-manorina ny ADN-Balkans, toy ny Metamorphosis Foundation sy ny Istinomer tamin'ny fanentanana tohanan'ny Hongroà momba ny fandisoam-baovao tany Gresy, Slovenia ka hatrany Makedonia Avaratra, naneho an-tsarintany ny fitaomana Rosiana amin'ny sehatry ny fampitam-baovao Serba ho vavahady mankany amin'ny firenena Yogoslavy taloha, ny fiparitahan'ny hery malefaka Rosiana amin'ny alàlan'ny solon'ny gazetiboky momba ny fahasalamana any amin'ny faritra sy ireo olana maro mifandraika amin'izany. Natao toeram-panadihadiana fitaratra ho an'ny Civic Media Observatory, tetikasa nataon'ny Global Voices, ny Balkans.
Nivoatra tsikelikely avy amin'ny fiaraha-miasa roa tonta sy maro mpandray anjara amin'ny fikambanana samihafa ny ADN-Balkans ary niha-mafy ny fiaraha-miasa tato anatin'ny roa taona farany. Maro tamin'izy ireo no mpanorina sehatra fampahalalam-baovao ary nanatevin-daharana ny tambajotra ihany koa.
Ny mpikambana mpanorina ny ADN-Balkans dia ahitana ny Metamorphosis avy any Makedonia Avaratra, ny mpanorina ny Truthmeter.mk, Portalb.mk sy Meta.mk; Istinomer avy any Serbia; Faktoje.al avy any Albania; fikambanana roa miaraka amin'ny sehatra fampahalalam-baovaony avy any Kosovo: Crno beli svet (CBS), sy Internews Kosova, ny mpanorina ny vavahadin-tserasera KALLXO. Ireo avy any Gresy JAJ.gr tohanan'ny News Literacy Center, Ellinika Hoaxes, Peace Journalism Lab, ary ny Digital Communication Network SouthEast Europe Hub.
Ahitana ny Metamorphosis Foundation avy any Makedonia Avaratra sy ny Istinomer avy any Serbia izay mpiara-mizara votoaty amin'ny Global Voices ny mpikambana mpanorina ny ADN-Balkans.
Ahitana fikambanana mpanamarim-baovao sangany Internews Kosova, ny vavahadin-tserasera KALLXO izay mamoaka vaovao amin'ny teny Albaney, ary ny Crno beli svet (CBS), fikambanana sady vavahadin-tserasera amin'ny teny Serba ireo mpikambana ao amin'ny tambajotra avy amin'ny vondrom-poko maro ao Kosovo.
Mpikambana mpanorina ihany koa ny Faktoje.al, ilay fikambanana mpanamarim-baovao sangany avy ao Albania.
Ahitana mpikambana miisa efatra avy any Gresy ihany koa ny ADN-Balkans: JAJ.gr (Journalists About Journalism) any Athena , izay mifantoka amin'ny fahaizana mifehy ny vaovao; Ellinika Hoaxes Tesaloniana, sampan-draharaha mpanamarim-baovao lohany ao amin'ny firenena; ny Peace Journalism Lab, tetikasa nataon'ny Sekoly ho an'ny Asa Fanaovan-gazety sy ny Seraseran'ny Haino Aman-jery ao amin'ny Oniversite Aristotle ao Thessaloniki izay manam-pahaizana manokana amin'ny fampiasana fikarohana akademika ao anatin'ny vondrom-piarahamonina matihanina any Gresy sy ny faritra, indrindra amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Tambajotran-Tserasera Nomerika SouthEast Europe Hub .